Bedelka MP3 in iPad aan Lugood nidaameed
Waxaa jira faa'iidooyin dhowr ah oo la isticmaalayo Lugood si hagaagsan music iyo warbaahinta kale files guud ahaan qalabka macruufka kala duwan, laakiin waqti isku mid ah waxa ay leedahay khasaaraha badan iyo sidoo kale. Wareejinta xogta waa mid aad u adag iyo marka labaad qofku qabo in ay bixio casriga ah marka ay timaado isticmaalka Lugood. In erayada fudud newbie ah ma awoodaan in ay isticmaalaan barnaamij software si sahlan oo ku qanacsan tahay sida uu isaga u qaababka aad u adag. Waxaa sidoo kale in la xuso in dhammaan qaab files music aan ay taageerayaan software ah oo halkan waxa uu noqonayaa mid madax xanuun marka user a doonayo in uu u hagaagsan music ah soo gudbin qaab ka mid ah taas oo aan la taageeray by barnaamijka.
MP3 Transfer in iPad la TunesGo: Part1
Part2: MP3 Transfer in iPad la Lugood
Part3: Waxa Ayidaya iyo Diidaya
Part4: MP3 Transfer in iPad la Media Daanyeer
Part5: faa'iidada iyo khasaaraha
Part1: MP3 Transfer in iPad (macruufka 9 taageeray) la TunesGo
TunesGo in la soo saaro by Wondershare malaha waa mid ka mid ah software ugu fiican ee jeer oo dhan sida u saamaxaya kuwa isticmaala si aad u hesho hal talaabo ka horeyso kale ee syncing files music iyo warbaahinta kale ee madadaalada. Waxaa jira faa'iidooyin dhowr ah oo isticmaalaya barnaamijkan iyo qaar ka mid ah sida soo socota:
TunesGo Resource xaq halkan joogo;
Waxaa si iPhone wareejin karaan MP3 ka dib u hagaagsan iyo sidoo kale waa in la ogaadaa in qaab aan la taageeray by barnaamijka.
Muuqaalka guud ee barnaamijka waa mid fudud in la isticmaalo oo aan adag yahay oo dhan.
Software waa inuu xaqiijiyo in files yihiin diinta qaab ku haboon inta ay la wareejiyo Lugood ah.
Mid ka mid ah hawlaha laga cabsado ee barnaamijka waa in ay si toos ah u tags ID3 music ku dari kartaa
i. User wuxuu u baahan yahay in ay soo bixi barnaamijka adigoo booqanaya URL http://www.wondershare.com/tunesgo/ oo soo socda Dardar in u muuqdaan in ay qaban rakibo. Marka la sameeyo interface ugu weyn ee barnaamijka muuqataa:
ii. User ayaa markaas u baahan yahay in ay ku xidhmaan iPad la computer si ay hawshu bilaabato,
iii. Marka software helo iDevice ee shaashadda soo socda ka muuqan doontaa. Dhammaan music ka mid ah qalabka lagu qabtay doono barnaamijkan kaas oo sidoo kale waa mid ka mid ah functionalities cabsi badan aad ee barnaamijka:
iv. Barnaamijka Tani waxay u ogolaaneysaa user si loo hubiyo in MP3 waxaa sidoo kale soo jeesan oo loo wareejiyay iDevice ah. User xaq u baahan yahay in la raaco dejinta Jidka> dejinta ka PC
v. Marka qaab MP3 la synced ama laga keeno in software ah waxaa si toos ah u hagaagsan doonaa iPad in xiran yahay. Haddii iibsiga waxaa loo baahan yahay in iDevice kale oo sidoo kale loogu xidhi karaa si loo hubiyo in content la mid ah waxaa lagu wareejiyay, waxa uu sidoo kale.
Qaybta 2.Transfer MP3 in iPad (macruufka 9) la Lugood
Dadka isticmaala qaar ka mid ah arrintan oo noqon karo dhibaato laakiin tutorial tan loo qoray hayo maanka arrimaha ay waajahaan user caadi ah in arrintan la xiriira. Si aad baa loogu sameeyey waxaa lagu talinayaa in la hubiyo in hannaanka uu soo halkan ku xusan waxaa la socda talaabo talaabo ah in ay ka fogaadaan wax kasta oo mad:
i. User wuxuu u baahan yahay in la furo Lugood ee kombiyuutarka oo aan xiriir qalab kasta oo raaca File Jidka> dar folder maktabadda
ii. Folder The in uu yahay in lagu daro waa in uu ku yaalaa gal PC ama Mac,
iii. Marka waxa ku jira folder la keeno waxaa lagu dari doonaa maktabadda Lugood ah:
iv. Si aad u dhigay music si user ay u baahan tahay in la raaco Playlists Jidka> Recently Added:
. v user ayaa markaas u leeyihiin in ay midig u guji gabayadii dhawaan laga keeno ama warbaahinta si loo hubiyo in macluumaadka la xiriira waxaa lagu soo ururin doonaa,
vi. In uu suuqa kala socda user edit karaa info ah sida looga baahan yahay in ay helaan songs dhawaan laga keeno si fudud:
vii. Si aad u bedesho gabayadii dhawaan ku daray in laga keeno Mp3 si ay u noqdaan kuwo la socon kara iDevice user ay u baahan tahay in la raaco jidka Edit> rabtid> General> goobaha dejinta:
viii. Sanduuqa wada hadal socda weydiin doonaa user ku saabsan qaabka ay doonayaan inay badalo songs in ay:
IX. User ayaa markaas u baahan yahay si loo muujiyo iyo xaq guji heesaha si ay u abuuraan oo ay MP3 version:
x. Files MP3 ayaa la abuuri doono iyo files asalka ah in la muujiyaa doonaa. Hit badhanka delete in samaysay shaqada iyo dhamayso:
xi. Marka la sameeyo iPad la synced karaa Lugood si loo hubiyo in songs mp3 in la keeno barnaamijka waxaa si fudud synced iyadoo wax dhibaato ah.
Qaybta 3. Waxa Ayidaya iyo Diidaya
Marka songs waxaa laga keeno si Lugood waa ay fududahay in iyaga hagaagsan oo wax iDevice ahayn bartilmaameedka mid.
Geedi socodka waa muddo dheer oo ay ka buuxaan dhibaatana u user cusub oo aan sidaa u newbie ah waxa suurtagal ma ahan oo dhan.
Lugood ayaa loo hubiyo in files audio asalka lagu muujiyey si ay u tirtiray si looga fogaado in hal hawl ah ee ka kooban.
Qaybta 4.Transfer MP3 in iPad la Media Daanyeer
Media Daanyeer waa barnaamij software ah oo loo isticmaalo si ay u hubiyaan in music ah waxaa maamula gal PC ah, Mac iyo sidoo kale qalabka waa hagaagsan la. Iyada oo celcelis ahaan taageero macaamiisha iyo muuqaalada laga cabsado in lagu gundhig gudahood barnaamijka waxaa uu noqday mid ka mid ah xulashada ugu wanaagsan ee dadka doonaya in ay maamulaan music aad u culus. Waxa ay taageertaa qaabab faylka oo dhan iyo sabab la mid ah naadiyada kala duwan ayaa qiimaha software sida mid ka mid ah ugu wanaagsan ee jeer oo dhan.
Ka dib waxaa habka loo isticmaalo si ay u gudbiyaan MP3 in iPad ama qalab kasta oo la isticmaalayo daanyeer warbaahinta:
i. Qalabka waa in lagugu xiro kombiyuutarka:
ii. Burcad barnaamijka software Media Daanyeer in horay loo rakibo gal nidaamka:
iii. Muddo liiska auto u hagaagsan u calaamadee music oo dhan si MP3 files yihiin in ku yaal drive ka adag yihiin qabtay:
iv. Muddo u hagaagsan doorasho auto ka dooro ikhtiyaarka ah "Auto nidaameed sida ugu dhaqsaha badan qalabka ku xiran" si looga fogaado habkan mustaqbalka:
. v Si loo hubiyo in Daanyeer Warbaahinta u eg Lugood waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in goobaha soo socda ayaa sidoo kale kulan ka dhigo:
vi. User ayaa markaas u baahan yahay in la garaaco button iPad gudahood menu ugu weyn ee ay u hagaagsan music iyo dhameysan nidaamka:
Qaybta 5.Pros iyo khasaaraha
Software Taas ayaa ka dhigaysa hubiyo in macluumaadka ku saabsan tareenka waa caadi iyo wareejiyo qalabka kale.
Taageerada macaamiisha barnaamijka software ma aha ilaa ay calaamaddu ku taal, oo waa mid ka mid ah arrimaha dadka isticmaala ku wajihi arrintan la xiriira.
The shaqeynta Auto DJ of software ay go'aamiso in sida badan songs yihiin dhaa liiska hadda yeynan.
> Resource > iPad > Sidee si ay u gudbiyaan MP3 in iPad la / aan Lugood nidaameed